China Abierto emeghe akara uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-MYI008 Manufacture and Factory | Meiyi
Abierto emeghe akara uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-MYI008
Nọmba nlereanya: MYI ihe: Ikanam neon emeghe akara
Emere ihe ịrịba ama anyị niile site na ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi iji nyere aka kpuchido gburugburu ebe obibi.
1. Ọgwụ akpụzi.
2. Otutu agbajiri agbaji gosiputa.
3. Ezigbo Nzipụta, Ọbụna N'ụbọchị.
4. Ala Voltaji Led.
5. Nchekwa & Inogide.
6. Shei Square, gbasie ike.
7. Pụrụ iche ikpe na elu-ọgwụgwụ azụmahịa klọb, hotels, hotels, obodo.
Hazie ọdịdị gị ga - ekwe omume ijikọ agba iji gosipụta akara ngosi, akara ngosi, akara ụlọ ahịa ma ọ bụ mmemme; ị nwere ike ịgbanwe ókè & "Mepee" agba iche iche
Njikwa Site Igodo nke Fzọ Fob… setịpụrụ oge iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ site na igodo onye isi mkpuchi gụnyere ma ọ bụ ogwe azụ
4 Function Fun… jidere ngwa ngwa, ihe ngosi a mepere emepe na-enye "Static", "Pịgharịa", "Agba-Mpịakọta" & "Flash & Phase" - maka agba dị ike na -achọ & na-egbu maramara
Bbọchị Bright na Knight… ụfọdụ ihe ngosi ọkụ na-emeghe maka ụlọ ọrụ anaghị adị mfe ịhụ n'ụbọchị, agbanyeghị akara ngosi a na-enwu gbaa dị oke mma.
Low Cost, Low Mmezi Low adịghị ka neon oghe oghe, LEDs are fit & echefu, & nwere ala-ike oriri; jiri n'ime ụlọ, na-abịa site n'agbụ & na-edozi nko
OR HORIZONTAL NEON OPEN SIGN】 - Nke a bụ ihe ntanetị dị larịị neon OPEN, akara ngosi "Mepee" nke oma.
L ULTRA BRIGHT & ENERGY SILE】 - Nke a bụ neon oghe oghe oghe aka ya na uzo di elu na-enwu enwu nke oma, enwere ike ihu ya site na ihe kariri 100, na-eme ka ndi ahia choputa ulo ahia gi ma ọ bụ ihu windo.
PVC AKW -KWỌ AKW PVCKWỌ AKW PVCKWỌ】 - N'ihe nke ndị ọkachamara PVC, ihe ngosi a na-emeghe bụ ọkụ na-eguzogide ihu igwe ma na-eyiri. Ihe onwunwe PVC na-agbanwe agbanwe na ntụgharị ọkụ dị elu na-eme ka ìhè na-abanyewanye ike ma na-enwu gbaa.
Mfe ịwụnye & jiri】 - Ihe na-acha ọkụ ọkụ neon mepere emepe na-abịa na akara nkedo na nkwụnye ọkụ. Naanị nko na kpọgidere akara ngosi ọkụ gị, wee malite ịhụ nsonaazụ ya.
AKW APKWỌ ND】 D】 N'】LỌ】 - A na-agbanye akara ngosi neon OPEN na etiti siri ike ma dabara maka mgbidi ma ọ bụ windo. Zuru oke maka azụmaahịa na azụmaahịa ọrụ, ụlọ nri, ụlọ mmanya, ụlọ ahịa, windo, mgbidi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nke gara aga: N'ogbe ụlọ elu udi factory price neon mgbidi elekere -20LNC001
Osote: Acryli LED neon oghe oghe na arc na oge ahia-MYI006
Acryli LED neon oghe oghe na oge ahia -...